रोबोट “सोफिया”ले साउदी अरबको नागरिकता पाइन – संसारमा नै कुनै रोबोटलाई नागरिकता दिएको पहिलो पटक ! – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
ह्यान्सन रोबोटिक्सले निर्माण गरेको ह्युमोनोइड रोबोट “सोफिया” लाई साउदी सरकारले नागरिकता प्रदान गरेको छ।
संसारमा नै कुनै रोबोटलाई नागरकिता दियिएको यो पहिलो पटक हो।
सोफियाले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ को प्रयोगले मान्छे हरु संग दोहोरो कुरा गर्न सक्छिन। नागरिकता पाएपछि सोफियाले पासपोर्ट निकाल्न संक्ने छिन र उनले पनि अरु मान्छेले जस्तै हवाईजहाजको क्याबिनमा यात्रा गर्न मिल्ने छ ।
तपाई पनि सोफ़िया संग कुनै बेला भेंटिएर गफिन सक्नु हूनेछ !
केहि समय पहिले सोफिया र अन्य रोबोटहरु जिम्मी फेलन को शो मा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
robot sophia रोबोट